स्वास्थ्य – Page7– JanaSanchar.com
के अरू कसैसँग यौनसम्पर्क राखेको श्रीमानलाई थाहा हुन्छ ?
म एक सन्तानकी आमा हुँ । लगभग दुई वर्ष भयो, मैले आफ्नो श्रीमान्सँग यौनसम्पर्क नराखेको । अर्को एक पुरुषसँग माया बसेकाले दुवै जनाको सहमतिमा करिब १५ महिना लगातार यौन सम्पर्क राख्यौँ र दुई महिनापहिले ऊ पनि वैदेशिक रोजगारीमा गयो । त्यसयता मैले कसैसँग सम्पर्क राखेकी छैन । हुनत म जोसँग पनि यौनसम्पर्क राख्ने महिला होइन, तर पनि आफ्नो श्रीमानबाहेक..
एक्स–रे गर्ने बहानामा एक १५ वर्षीया किशोरीमाथी यौन दुव्यबहार
एक्स–रे गर्ने बहानामा एक १५ वर्षीया किशोरीको संवेदनशील अङ्गमा हात लगाएको आरोपमा प्रहरीले धरान १० पुतलीलाइनस्थित डा. हरी शर्माको क्लिनिकमा कार्यरत शरणकुमार राईलाई पक्राउ गरेको छ । बन्द कोठमा नग्न बनाएर प्राविधिक राईले ढाडको समस्याको एक्स–रे गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा संवेदनशील अङ्गमा पटकपटक हातपात गरी यौन दुव्र्यवहार गरेको उजुरी..
कुन समयमा यौन सम्पर्क गर्दा गर्भ रहदैन?
यौन मानवीय र जिवित प्राणीको नैसंर्गीक आवश्यकता नै हो । मानिसलाई खानपानको जरुरी भएजस्तै सेक्सको पनि उत्तिकै मात्रामा आवश्यकता पर्छ । तर सेक्सका पनि चरण र प्रक्रियाहरु हुन्छन् । विबाहिताले गर्ने सेक्स र अविवाहिताले गर्ने सेक्समा जोखिम र चुनौताहरु उत्तिकै मात्रामा अघि पछि हुन्छन् । सेक्समा रोमान्स र आनन्दको कुरा त छँदैछ । यससँगै सेक्स..
मुख, ओठ र जिब्रोमा खटिरा आयो ? यी घरेलु उपाय अप्नाउनुहोस्
के तपाईको मुखमा साना-साना बिबिरा, फोका-फोकी आएर निकै सताएको छ ? मुखभित्र, जिब्रो, गिजा, ओठ लगायत मुखको कुना-कानी र कहिलेकाहीँ गालाको छेउसम्म पनि घाउ भएकाे छ ? यस्ता घाउ खटिराकाे समस्या बढेर जटिल समस्या पनि अाउन सक्छ । घाऊ ठूलो र गहिरो भएमा खान बोल्नै नहुने किसिमको पनि हुन सक्छ । यसले गर्दा लगातार दुख्ने, पोल्ने, ज्वरो आउने, घाँटीको ग्रन्थि..
‘लिभिङ टुगेदर’ ७२ घन्टे चक्कीमा निर्भर
‘लिभिङ टुगेदर’ रहेका जोडी असुरक्षित गर्भ रोक्न ७२ घन्टे चक्की(आई–पिल) मा निर्भर रहने गरेको पाइएको छ । उनीहरुको एउटै चाहना हुने गरेको छ–नियमित यौनसम्पर्क पनि गर्न पाइयोस, अनिच्छुक गर्भ पनि नबसोस ।’ असुरक्षित यौन सम्पर्क भएको ७२ घन्टाभित्र गर्भ रोक्न प्रयोग गरिने चक्की पछिल्लो समय दुरुपयोग हुने गरेको पनि पाइएको छ । विवाहित महिलाको..
हस्तमैथुनले सॉच्चिकै मानिस दुब्लो हुन्छ ?
हस्तमैथुन आत्मरतिको सबैभन्दा सजिलो र बहुपरिचित माध्यम हो । यौनसाथी सँगसँगै बसेर अलगअलग गर्ने वा परस्परमा एकअर्कालाई गरिदिने हस्तमैथुनलाई पारस्परिक हस्तमैथुन भनिन्छ । हस्तमैथुन सबै उमेर र लिंगका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने आत्मरतिको माध्यम हो । दुब्लो हुनुमा हस्तमैथुनको भूमिका कतै हस्तमैथुनले हानी गर्छ कि ? धेरैमा चासो र चिन्ता हुन्छ ।..
औद्योगिक क्षेत्रवरिपरिका ८४ प्रतिशत बालबालिकाको रगतमा सिसा
८ कात्तिक, । देशका दुई ठूला औद्योगिक क्षेत्रवरपरका बालबालिकाको रगतमा लिड (सिसा) को मात्रा अत्यधिक पाइएको छ । सन् २०१६ को अन्त्यतिर गरिएको परीक्षणमा वीरगन्ज र काठमाडौंका ८४ प्रतिशत बालबालिकाको रगतमा सिसाको मात्रा धेरै पाइएको हो । राजधानी काठमाडौंका ५० बालबालिकामा गरिएको परीक्षणमा अधिकांशमा लिड (सिसा) को मात्रा पाइएको डा. केयर गौतमले..
महिनावारी भएका बेला यौन सम्पर्क कतिको शुरक्षित कति अशुरक्षित ?
मेरो श्रीमान् म महिनावारी भएको बेला सेक्स गर्न खोज्नुहुन्छ । यस्तो बेलामा छुनु हुन्न भन्ने हाम्रो परम्परा छ । उहाँ भने ‘केही हुँदैन, झन् रमाइलो हुन्छ’ भन्नुहुन्छ । महिनावारीमा सेक्स गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? यसले महिलालाई शारीरिक हानि त हुने होइन ? महिनावारी भएको बेलामा सम्भोग गर्न हुन्छ कि हँुदैन भन्ने कुरामा अझै पनि केही भ्रम पाइन्छन् ।..
मुख गन्हाउनु । सामान्यत मुख सफा नगरेको, दाँतमा ब्रस नगरेको अवस्थामा यस्तो समस्या हुनसक्छ । तर, कतिपयको सास/मुख गन्हाउँछ, अन्य दिनमा पनि । यसको कारण धेरै हुनसक्छ । गलत खानपान, पेटको समस्या, दाँत वा मुखको सरसफाई नहुनु आदिले मुख गन्हाउँछ ।हामी ठान्छौं, यो सामान्य समस्या हो । यद्यपी कतिपय अवस्थामा यो गंभिर रोगको संकेत पनि हुनसक्छ । त्यसैले समयमै..
मासु खाँदा विशेष सावधानी अपनाउन चिकित्सकले सुझाव
वडादशैँको आज आठौँ दिन महाअष्टमी देशभरका शक्तिपीठ र घरघरमा बलि दिएर मनाइँदैछ । देवीलाई बलिसँगै बोका, राँगा, कुखुरा लगायतको बढी नै मासु उपभोग गर्ने गरिन्छ । तर यसरी मासु खाँदा सावधानी अपनाउन सकिएन भने मासुले रमाउने भन्दा पनि रोग निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले विशेष सावधानी अपनाउन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् । जिल्ला पशु सेवा कार्यालय,..